नेपाल वायुसेवा निगम र विकृति – Rajdhani Daily
नेपालका सरकारी संस्थानहरू बोझ बनिरहेको कुरा लामो समयदेखि चल्दै आएको हो । यिनमा गरिएको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको कारण यस्तो महसुस गरिएको हो । केहीमा सुधार देखिए पनि धेरैमा अपेक्षित सुधार देखिन सकेको छैन । यिनै मध्येको एक हो नेपाल वायुसेवा निगम । सरकारी ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा स्थापनाकालदेखि नै सत्ताधारीहरूको हस्तक्षेपको सिकार बन्दै आएको अर्थात् राजनीतिक हस्तक्षेपमा परेको सरकारी संस्थान पनि हो । राजनीतिकै कारण यो विवादित भएको र बिग्रेको पनि हो । ऊसँगै जन्मेको थाइ एयरलाइन्सले संसारभर सेवा विस्तार गर्दा र विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय सेवाका माध्यमद्वारा संसार ढाक्दा पनि शाही नेपाल वायुसेवाबाट ‘नेपाल वायुसेवा’मा परिणत भएको ‘नेपाल एयरलाइन्स’को हविगत चाहिँ अझै पनि धुकचुकधुकचुक अवस्थामा नै छ ।
दुई सय सिट क्षमताका जहाजले नै बजार नपाइरहेको अवस्थामा तीभन्दा ठूला जहाज ल्याउनु आफैंमा उचित थियो, थिएन ? बजार अर्थात् गन्तव्यकै निधो नभई उडान अनुमति कहा“सम्म पाउन सकिन्छ भन्ने नै ठेगान नगरी, सम्भावनाको आ“कलन नै नगरी हचुवाको भरमा जहाज किन्ने निर्णय हुनुमा कोको दोषी छन्, यस्ता कुराको खोजी हुनु जरुरी देखिन्छ
हाल निगमले बोइङ ७५७, एयरबस–३२० र वाइडबडी ए–३३० मार्फत विभिन्न क्षेत्रमा दैनिक औसत ५.५७ उडान गर्दै आएको छ ।
वाइडबडी किन र कसरी ल्याइयो ? सरकारले त्यसका लागि किन जमानी बसेर ऋण दिलायो ? भन्नेजस्ता प्रश्न अहिले उठेका छन् । निगम नेतृत्वको भने लाचारी र मगन्ते पारापछि । स्मरणीय छ, निगमले हालै आफ्नो वित्तीय अवस्थाबारेको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै खर्च धान्न मुस्किल भएकाले पुँजी बढाउन र नगद प्रवाहमा रहेको समस्या टारिदिन सरकारसँग सहयोग मागेको छ । श्वेतपत्रमा जहाजको आर्थिक तथा व्यावसायिक अवस्थालाई सुधार्न ठूला जहाजलाई लामो गन्तव्यमा यथाशक्य चाँडो उडाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ । तर, निगम ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डको विवादमा मुछिएको इतिहास भएको र पछिल्ला वाइडबडीको सन्दर्भमा पनि त्यस्तो आशंका गरिएको सन्दर्भमा यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । हाम्रो विमानस्थलबाटै विश्वका विभिन्न वायु सेवाले राम्रो उडान गरेका, राम्रो कमाइ गरेका छन् । तर, हामीले किन गर्न सकेका छैनौं ? हामी किन कालोसूचीबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनौं ? र त्यसबाट मुक्त हुनका लागि किन ठोस प्रयास भइरहेको छैन ? किन उडान सेवा विस्तार र नयाँ गन्तव्यको खोजीका लागि सार्थक प्रयास भइरहेको छैन जबकि नेताहरूको, मन्त्रीहरूको र व्ययवस्थापक प्रशासकहरूको विदेश यात्राको लहर जारी नै छ ।
निगममाथि सधै राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । अहिलेसम्म पनि हस्तक्षेप कायमै छ । दुई तिहाई बहुमतको ऐतिहासिक सरकारले हालै मात्र नयाँ ‘थप कार्यकारी’को नियुक्ति गरेको छ । एक जना कार्यकारी अध्यक्ष र अर्का चाहिँ कार्यकारी सञ्चालक । सिधै हटाउँदा मुद्दा मामिला र पुनर्वहाली हुने सम्भावनाले गर्दा, हुन सक्छ यसो गर्दा अघिल्ला कार्यकारी जसले ‘मेनेजिङ डाइरेक्टर’को रूपमा काम गरिरहेका थिए, उनले दबाबमा कुर्सी छाड्लान् भन्ने सोचिएको थियो । तर, उनले पद नछाडेपछि श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दा उनको कार्यकालका प्रयास असफल भएको भन्दै नैतिकताको कारण पनि पछि हट्लान् र नयाँलाई सहज होला भन्ने सोचाइ पनि हुन सक्छ । तर जब्बर तथा एकपटक ठूलो अभियोगमा सफाइ पाएर राजनीतिक पहुँचकै कारण पुनः त्यही संस्था र ओहदामा पुग्न सफल व्यक्तिले किन लरतरो तालले कुर्सी छाड्थे र ? फेरि जहाज ल्याइएको त वास्तविकता हो र उनले एक्लै निर्णय गरेर जहाज ल्याइएका पनि होइनन् । यसमा सरकारको साथ, सहयोग र समर्थन थियो ।
यस सन्दर्भमा आएका झन्डै २ सय सिट क्षमताका जहाजले नै बजार नपाइरहेको अवस्थामा तीभन्दा ठूला जहाज ल्याउनु आफैंमा उचित थियो थिएन ? बजार अर्थात् गन्तव्यकै निधो नभई उडान अनुमति कहाँसम्म पाउन सकिन्छ भन्ने नै ठेगान नगरी, सम्भावनाको आँकलन नै नगरी हचुवाको भरमा जहाज किन्ने निर्णय हुनुमा कोको दोषी छन् ? यस्ता कुराको खोजी हुनु जरुरी देखिन्छ । जहाज खरिद निर्णय वास्तविकताभन्दा पनि अनुमानमा र कागजी घोडा हेरेकै भरमा भएको रहेछ भन्ने त यसै प्रस्ट भयो, देखाउनका लागि मात्र जहाज खरिद गर्ने, त्यो पनि ऋणमा, त्यस्तो संस्था कसरी पो उँभो लाग्छ र ? त्यसको बेहाल नभए अर्को कसको हुन्छ ? यसैले यो निगमको वर्तमान अवस्था स्वाभाविक हो ।
अब भने गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कहिलेसम्म ठगीखाने भाँडो, बनाउने कमाउ अड्डा बनाउने र रमिता बनाउने निगमलाई ? उडाउने क्षमता नै नभएका विमान ऋणमा किनेर जहाजको संख्या गनेर ऋण चुक्ता हुँदैन । जहाज किन्नु वा जहाजको संख्या बढाउनु बहादुरी होइन, नयाँनयाँ गन्तव्यमा उडाउनु, कमाउनु, आत्मनिर्भर हुनु र उडान क्रमशः विस्तार गर्नु बहादुरी हो । निगमले श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको हिसाबकिताबको स्थितिलाई हेर्दा निगमकै कारण सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोष पनि समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यस सन्दर्भमा निगमले आग्रह गरेझैं पुँजी थप्ने होइन कि यी जहाजलाई नयाँ मै बिक्री गरेर निगमलाई सदाको निम्ति बन्द गरिदिँदा वेश हुने देखिन्छ ।
Tags: निगम र विकृति